Huawei WiFi AX3, iyo router iwe yaunofanirwa kunge uine yekuvandudza kubatana kwako | Gadget Nhau
Huawei WiFi AX3, iyo rauta iwe yaunofanirwa kuve nayo yekuvandudza kubatana kwako
Miguel Hernandez | 09/07/2021 13:00 | Home otomatiki, Gadgets, Musha, Reviews
El WiFi 6 Icho chiri kuve chinozivikanwa, mazhinji ekupedzisira-ekupedzisira zvishandiso akatozvisimudza kubvira gore rapfuura uye iri kuwedzera zviripo kunyangwe mudzimba medu. Nekudaro, iwo maaraira ekare ayo makambani "anotipa isu" ari kure nekupa ruzivo rwekutanga mune izvi.
Isu tinoongorora iyo Huawei WiFi AX3, iyo inotsiviwa yakanaka yeanoshanda router yako neWiFi 6 uye inoshamisa mashandiro. Ngatione kuti ungatora sei yako imba yeWiFi kune inotevera nhanho uye nekuvandudza yako yakazara internet ruzivo neiyi isingadhuri Huawei chigadzirwa.
Sezvazviri nguva dzose, isu tafunga kuita vhidhiyo maunogona kutarisa kune unboxing yeiyi Huawei WiFi 6 iyo unogona kutenga kubva ku59,99 euros paAmazon. Usapotsa ongororo pane yedu chiteshi YouTube nekuti isu zvakare tinokuratidza maitiro ekuimisa nekukurumidza. Tisiye chero mibvunzo mubhokisi remashoko, isu tichafara kukubatsira uye iwe unotibvumidza kuti tirambe tichikura uye tichikuunzira ongororo dzakanakisa.
1 Dhizaini: Minimalism mwenje makore ari kure nevashandisi
2 Unhu hunhu: WiFi uye "yepamusoro-kumagumo" network
3 Kuiswa uye kumisikidzwa
4 Yedu bvunzo uye mushandisi ruzivo
5 Zvayakanakira nezvayakaipira
Dhizaini: Minimalism mwenje makore ari kure nevashandisi
Takatanga nekugadzirwa, ngatitarisei izvi, izvi Huawei WiFi AX3 Iwo makore akareruka kure neanoshanda 'router, ine mashoma mashoma angled maumbirwo. Iwo mana ekumashure maantenna anodzoserwa uye isu tinogona kuaisa pane iyo router kana tichida.
Icho chakaonda kwazvo zvekuti chinonakidza, kunyange iine hunyengeri, inomutswa kumashure. Yakagadzirwa nechena matte plastiki, inodzosera zvigunwe uye hairatidze guruva, hwomutambarakede. Isu tinoratidzira LED kumberi uye bhatani repakati rekubatana neiyo Huawei Link. Zvemashure Isu tinosiya iyo WAN yekubatanidza iyo ichapa iyo network kune iyo router, iyo simba chiteshi, iyo On / Off bhatani uye matatu LAN LAN madoko. Pasina kukanganwa kuti kona yekona yekumberi kweiyo router ndiyo nzvimbo yeNFC yekubatanidza zvishandiso zveHuawei mune «plis».
Unhu hunhu: WiFi uye "yepamusoro-kumagumo" network
Isu tatoziva kuti yakanaka, asi ikozvino chimwe chinhu chiri kuuya icho chingangodaro chakanyanya kukosha kupfuura chinhu chakapfuura, chii chakavanda mukati? Tinotanga nekurangarira kuti iyi Huawei WiFi AX3 inotengeswa mumhando mbiri, mbiri-musimboti uye quad-core. Nekuda kwemusiyano wemutengo, ini pachokwadi ndinokurudzira iyo quad-core vhezheni, inova ndiyo yatiri kuongorora izvozvi. Iwo matatu ekumashure emachiteshi eGigabit Ethernet saka iyo chiuru Mbps bandwidth inovimbiswa.
Padanho rekuchengetedza, isu tine password yekutsigira WPA3 saka tinogona kukupa iwe kusvika padanho rino, kana tichida. Nezve WiFi, isu tine chiyero WiFi 6 game 802.11ax / ac / n / a 2x2 uye 802.11ax / n / b / g 2x2 uye MU-MIMO, hapana chimwe uye hapana zvishoma. Iyo processor inotyaira zvese izvi ndeye GigaHome Quad-Core 1,4 GHz iyo ichave nebasa rekugovera iyo chiratidzo zvinehungwaru, pamwe nekutibvumidza isu kunakidzwa nezvimiro zveHuawei's AI Life application yatichataura nezvayo gare gare. Chinhu chega chakasara kutaura, kunyangwe isu takatotaura nezvazvo, ndechekuti isu tine NFC pazasi payo.
Kuiswa uye kumisikidzwa
Kuti tiise iyo tinayo nzira mbiri dzatinokusiira pazasi:
Bvisa network dzeWiFi dzeanoshanda router uye ubatanidze tambo yeEthernet kuburikidza neLAN port 1 yeanoshanda router uye WAN chiteshi cheAX3. Neiyi nzira, isu tinotsiva iyo network yeWiFi yeanoshanda router neiyo yedu yeAX3 router, asi huremu hwetaneti hucharamba huchitakurwa nehwo hweanoshanda.
Isa router yedu mu "bridge mode" uye ubatanidze kubva kuLAN 1 yeanoshanda router kune iyo AX3's WAN. Nenzira iyi, iyo router yeanoshanda "yakapfuurwa" uye inongoita sebhiriji pakati pefibre optic tambo uye yedu AX3 router, saka kubatana kwacho kunoenderana zvachose neAX3.
Tasarudza yechipiri sarudzo, chimwe chinhu chakaomesesa asi icho chinovimbisa rusununguko rwakazara kubva kune yekare kambani kambani, kuona, kana kuyedza, kuti isu tine kunonoka kudiki mukutaurirana, kwakanakira kutamba mitambo.
Iye zvino isu tinongobatana kune iyo AX WiFi network3 uye isu tinoteedzera akateedzana matanho anozotitungamira kuti tigovera password, zita uye zvese zvatiri kuda. Huawei inoita kuti ive yakapusa zvekuti haina kukosha kutsanangura. Chii chakakodzera kurodha pasi Huawei's AI Life application (Android / iOS) Izvi zvichatibvumidza:
Chengetedza izvo zvishandiso zvakabatana uye ugovapa mazita ekuvazivisa
Ganhurira kurodha pasi / kurodha kwese chishandiso chakabatana nemaoko
Gadzira yepamusoro yevabereki kudzora system
Gadzira muenzi WiFi netiweki
Seta timer yeWiFi
Tsvaga network yedu
Batidza / bvisa iyo LED chiratidzo
Shandisa otomatiki WiFi network optimization wizard
Gadziridza uye gadzirisa iyo AX3
Zvirokwazvo ivo kushandiswa iri rimwe danho kumberi, shamwari yakakwana inoshandura chiitiko ichi kuita sisitimu yakazara.
Yedu bvunzo uye mushandisi ruzivo
Isu tanga tichiedza iyo AX3 ine symmetric 600/600 Mbps network kubva kuO2 (Telefónica) mubridge mode, sezvataurwa pamusoro apa. Kune izvi isu takashandisa zvishandiso zvinoenderana neiyo WiFi 6 standard, senge MacBook Pro uye Huawei P40 Pro. Panguva imwecheteyo isu takave nemidziyo inosvika makumi matatu yeIoT yakabatana pakati pevatauri, vanochenesa magetsi, mwenje wakangwara uye otomatiki epamba kazhinji.
Iyo 2,4 GHz network: Muchiitiko ichi, kumhanya hakuna kuve kuvandudzwa kunozivikanwa, huwandu hwakatadziswa uye hunopa mhedzisiro yakafanana neyaaishandisa, zvisinei, kusiyana neiyo yapfuura, network haina kuzadzwa kana kubiridzira mashandiro echigadzirwa, iyi AX3 inokwanisa kubata zvinopfuura makumi mashanu ekubatana panguva imwe chete, uye inoratidza.
Iyo 5 GHz network: Mune ino kesi takaona kuvandudzika kunoonekwa zvese maererano nekuvhara uye kumhanya, kusvika paavhareji kumhanya kwe550 / 550 Mbps
4.5 nyeredzi chiyero
Kudzokorora kwe: Miguel
Yakatumirwa pa: 9 de julio de 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 5 de julio de 2021
Kubatika (saizi / uremu)
Kazhinji, ruzivo rwakavandudzika zvinoshamisa uchishandisa chete iyo Huawei AX3 router uye uchisiya opareta mubridge mode, saka tinokurudzira, kunyanya kana seni une maIoT mazhinji kana michina yekushandisa pamba kumba, unofunga kutora nhanho kumberi mune izvi. Mutengo waro wakakomberedza makumi mashanu emaeuro zvichienderana nenzvimbo yekutengesa kana paine zvinopihwa, izvo zvinowanzoitika, saka handigone kuwana chikonzero chimwe chekuramba ndichichengeta icho cheanoshanda.
Dhizaini inoshamisa uye zvinhu zvakasarudzwa zvakanaka
Nyore setup uye AI Hupenyu app
Mutengo chaiwo usingakundike
Ini ndinosuwa chimwe chinhu kupfuura chiyero
Iyo haina kusanganisira CAT 7 tambo zvirinani, asi CAT 5e
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » Home otomatiki » Huawei WiFi AX3, iyo rauta iwe yaunofanirwa kuve nayo yekuvandudza kubatana kwako
Maitiro ekuona iyo Tokyo 2020 Olimpiki Mitambo yemahara uye kurarama
Realme Watch 2, iyo yakachipa-inodhura yekupinda-chikamu chikamu kune anopfeka